Semalt Expert: Sei & Sei Kutaura Pamusoro Pemugwagwa Wemukati Nekunze MuGoogle Analytics
Kana zvasvika pakugadzirisa nhaurwa yeGoogle Analytics, zvinokosha kuti iwe unogona kusiyanisa mukati memauto emotokari kubva kune dzimwe kunze. Tinowanzotanga nekuwana IP yako, uye rambai muchidzivirira mukati memugwagwa kuitira kuti chete motokari dzomukati dziratidze mukati mehupfumi. Isu tinogonawo kusarudza kuenzanisa kunze kwemotokari kunotarisana nemugwagwa wepakati zvichida kuburikidza nekugadzira maonero akasiyana-siyana nemafuta.
Julia Vashneva, Mutungamiriri Mukuru weVatengi Vekubudirira Semalt , anopa chiito chinokurudzira panyaya iyi.
Kuti uchengetedze mutemo wako wepakati wakaparadzana kubva mumugwagwa wako wekunze, iwe unofanirwa kunyatsoziva nhengo dzako dzose dzesangano reIndaneti - que es calidad de luz en fotografia. Iwe unogona kutaurirana nekambani yeTI yekambani yako kana iwe uchida runyoro rwakakwana rwezvose mukati reIndaneti mazita. Izvi zvinogona kunge iri imwe kero ye IP kana mazita akawanda ezvivako zvakasiyana-siyana kana madhipatimendi.
Zvisinei, kana data iyi isingawanikwi kwauri, iwe unogona kugara uchiona iwe pikeri yako yePI uye yevamwe kuburikidza neGoogle kutsvaga 'Chii chandiri IP'. Kune masangano mashoma, izvi zvinogona kunge zviri imwe IP iyo iri kushandiswa nemakombiyuta ose muhurongwa.
Kana kuva nehutachiona hwekutsvaga kwekutsvaga kwemashoko kusina kukodzera kusangano rako uye hauzombovi, saka zvinokurudzirwa kuti uzvidzivirire kubva kune data yose yekubika. Izvi zvinogona kuwanikwa kuburikidza nokusabvisa kudarika kwemukati kubva kuGoogle Analytics yako..
Kunyange zvazvo kugadzirisa kusakanganiswa kwebasa iri basa rakaoma, zvingave zvakanaka pane zvakaitika kuti webhusaiti yehutano yevashandisi vepamberi inowanzoita skew statistics. Zvinonzwisisika kuti mukati mumiriridzi wevanhu haazombodi kudiwa. Kana iwe uchifanira kuchengeta kutendeseka kwekubatanidzwa kwekunze kwemashoko uye mukati, iwe unoda kuenzanisa mukati uye kunze kwechitima panzvimbo panzvimbo.
Dambudziko rekuvhara motokari dzomukati zviri nyore. Zvose zvaunofanirwa kuita ndeyoKuisa kuGoogle Analytics account uye shanyira panhare yePurisa. Iwe zvino unofanirwa kusarudza Aunti neZimba iyo iwe unenge uine chinangwa chekusiya kushambadzira, Sarudza Filters pasi pebhuji Yese Web Site Data uye sarudza New Filter.
Unogona kutumidza Filter Usabvisa Mutemo Wemukati. Pakupedzisira, iwe unosarudza Predefined filter, inoteverwa neKusatendera uye wozoisa mukati yako yekero yeIndaneti. Kana uine mazita akawanda ekudzivirira iwe unofanira kungodzokorora nzira yacho.
Kana iwe uchiona zvichikosha kuti unzwisise maitiro evanhu vari kunze nevari mukati, zvakakosha kuti iwe urambe wakatendeka kweWebsite Data View. Kuti tibudirire izvi, zvose zvatinofanira kuita ndezvokuumba maonero matsva akaitwa zvakananga kwemutiro wako wekunze uye mukati. Muchiitiko ichi, maonero emukati anosikwa nekubatanidza motokari kubva mukati me IPs. Kune rumwe rutivi, maonero ekunze anokonzerwa nokusabvisa zvose mumugwagwa wepakati.
Kana uchinge waisa maonero ari kunze uye mukati, unogona kushandura pakati peZvose yepaIndaneti, maonero nekunze kuitira kuti uone kuti kupa kwako kwakakwana. Kuti uwane ruzivo rwemaonero ose, unogona kushanyira Google Analytics Home tab yako. Zvichida, iwe unogona kusarudza kuruka kune yako maonero zvakananga kubva kuAptwork kukasarudzwa pasi.